8 Strategies Iji melite gị Sales Prospecting Irè | Martech Zone
Na mgbede a, mụ na onye ọrụ ibe m na-apụ njem igwe kwụ otu ebe na n'etiti huffs na puffs anyị na-atụle usoro ahịa anyị maka azụmaahịa anyị. Anyị abụọ kwenyere na enweghị ịdọ aka ná ntị anyị tinyere n'ọrụ anyị na-egbochi ụlọ ọrụ anyị abụọ. Ngwaahịa ngwanrọ ya na-adọta otu ụlọ ọrụ na nha akọwapụtara, yabụ na ọ maralarị onye ndị nwere atụmanya ya. Azụmaahịa m pere mpe, mana anyị lekwasịrị anya nke ukwuu na ndị ahịa kachasị mkpa nke nwere ike irite uru site na iru anyị na saịtị a yana ọkachamara anyị na ụlọ ọrụ ahụ. O di nwute, anyi abuo nwere aha edeputara nke na-achikota uzuzu.
Ọ bụghị ihe a na-ahụkarị. Ndị ụlọ ọrụ na-enweghị ndị ahịa ahaziri ahazi na ndị ọrụ na-aza ajụjụ na-akwụsịkarị ahịa ruo mgbe ha chọsiri ike ire. Mkpebi ahụ nwere ike ibute mmekọrịta dị egwu nke ndị ahịa na atụmanya efu n'etiti onye ahịa nọ na mkpa na ụlọ ọrụ chọrọ ego ahụ.
Otu n'ime usoro kachasị dị mkpa na nke mbụ na ire ere bụ ịtụ anya - nke bụ usoro nke iru eru ndị gosipụtara igosipụta ọchịchọ ịme mkpebi ịzụta. Nzọụkwụ a dị oke mkpa na mmechi mmechi yana ka ndị dị otú a, a ga-egbu ya n'oge na n'ụzọ kwesịrị ekwesị iji hụ na ihe ịga nke ọma. N'ezie, ọnụ ọgụgụ na-ekwu na onye na-ere ahịa mbụ nwere ike iru mkpebi onye nwere 74% ohere iji merie nkwekọrịta ahụ ma ọ bụrụ na ha jikwaa ịtọ ọhụụ. Garret Norris, Onye na-azụ ahịa azụmahịa Sydney
Ndị na-azụ ahịa azụmahịa Sydney, ọkachamara Australia na ndị ọkachamara na ahịa, ahịa, na nkuzi, mepụtara nkọwa a zuru oke, Zọ Pro Ga-esi Na-atụkwu Anya nke Ọma, na-ewepụta atụmatụ 8 iji dịkwuo gị ahịa prospecting irè:
Soro usoro na-agbanwe agbanwe na-ewepụta oge kwa ụbọchị na usoro kwa izu.
Gbado anya, gbado anya, ma gbado anya na atụmatụ gị.
Mejuputa usoro di iche iche ma tụọ nsonaazụ nke ọ bụla iji chọpụta ebe ị na-enweta ọtụtụ mmetụta.
Mepụta edemede edemede ma nwalee okwu dị iche iche iji hụ ihe kacha emetụta. Na -echere mgbe niile iji hụ na nzaghachi gị dị na mkparịta ụka.
Bụrụ onye na-eweta ezigbo azịza site na ikwuputa ihe isi ike na mkpa ndi ahia gi na inye ha uzo solutions mgbe ahu i ga agbasoriri nke oma.
Mụọ ọkpụkpọ oku site na ijikọ ịntanetị tupu ịkpọ oku oyi na-anọghị n'ịntanetị ka ị wee mara nke ọma mgbe ị ruru ekwentị.
Guzosie ike dị ka onye ndu echiche site n'ịhụ na ị nwere akwụkwọ ọrụ ụlọ ọrụ na saịtị na mbipụta nwere ikike. Nke a ga - enye atụmanya nnukwu mmetụta ka ha na - enyocha gị yana ụlọ ọrụ gị.
Mara na atụghị egwu, ọ bụ ohere ịmekọrịta na ndu, gbaa mbọ hụ na ha ruru eru, ma bido njem ha site na olulu ahịa gị.
Great infographic na anyị na-aga ime eme ozugbo mee ka ahia anyi na-ere irè!
Tags: nchịkwa azụmahịandị nkuzi azụmaahịa sydneyakpọ oyiedu ndúeduatụmanyaNa-atụ anyaahịa na-eduganyocha ahịaoku na-ekpo ọkụ
Veragba ụgwọ TV iji bulie Branddị